Aqoon iswaydaarsi looga hadlayay hufnaanta Doorashooyinka oo magaalada Muqdisho ka furmay – Walaal24 Newss
Aqoon iswaydaarsi looga hadlayay hufnaanta Doorashooyinka oo magaalada Muqdisho ka furmay
December 2, 2019	Off	By walaal24
Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo kaashanaya hay’adda IESG ee ka taageerta arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa ku qabtay xarunta Guddiga, aqoon iswaydaarsi ku saabsan hufnaanta iyo horumarinta xiriirka daneeyeyaasha doorashooyinka.
Aqoon iswaydaarsigaan ayaa waxaa casharro muhiim ah ka bixiyay Mr. Judge kriegler, Guddomiyihii hore ee Guddiga doorashooyinka dalka Koonfur Africa sannadkii 1994-tii ahna khabiir ku xeel dheer hirgelinta doorashooyinka wadamada ka soo kabanaya colaadaha sokeeye.
Kulankan ayaa waxaa diirrada lagu saarayaa hannaanka shaqo hufnaan iyo dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay Guddi Doorasho.
“Waxaad ku hirgelin kartaan doorashooyin la aqbalo natiijada ka soo baxda markii aad ku guulaysataan kalsoonida daneeyaasha siyaasadeed iyo shacabka” Ayuu yiri Mr. Kriegler.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dalka Koonfur Africa ayaa aad ugu adkeeyey Guddiga in ay dhisaan hannaanka xiriirka iyo xallinta khilaafaadka doorashoyinka inta aysan guda gelin howlaha doorashooyinka.
Ka qaybg galayaasha aqoon iswaydaarsiga ayaa wax ka waydiiyay khabiirka arrimo la xiriira habka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ka hirgala dalka iyada oo ay jiraan duruufo u gaar ah dalka Soomaaliya.
Aqoon iswaydaarsigaan oo socon doona ilaa 4ta bisha Disembar 2019 ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan Guddiga, Xoghayaha guud iyo Agaasimeyaasha iyo lataliyaasha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Daawo: Ra’iisul wasaare Khayre oo khudbad dhiycyo bada taabaneysa ka jeediyay furitanka Shirka Dhalinyarada
Wasiirka Cadaalada Soomaaliya oo ka warbixiyay shir caalami ah oo uu kaga qeyb galay dalka Talyaaniga
Ku-Simaha Taliyaha Xoogga Dalka oo dhiirigalin ugu tagay Ciidamo loo diyariyay Howlgal
Dhageyso: Taliyaha Ciidamada Xooga oo ka hadlay Ciidamadii ku dagalamay isgoyska Tarbuunka ee magalada Muqdisho
Dhageyso: Amniga doorashada maamul Goboleedka Puntland oo war laga soo saaray
Sawir: Madaxweyne Farmaajo oo furay kal-fadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya